Chitsuru Sakafo fisakafoanana isan-taona-Enterprise News-NANTONG CHITSURU FOODS CO., LTD.
Sakafo hariva isan-taona Chitsuru
Fotoana: 2018-02-08 Hits: 101
Ho avy indray ny Sakafo hariva!
Tamin'ny 3 feb 2018, Nantong Chitsuru Foods Co., Ltd dia nahatanteraka ny sakafo hariva isan-taona 2017. Niara-nientana nankalaza ny fahombiazana tamin'ny 2017 ny mpiasa.
Taorian'ny mpiasa nipetraka tao amin'ny efitrano, ny filoha Yu sy ny talen'ny Du dia maneho fisaorana an'ireo mpiasa, izay miasa mafy manome antoka ny kalitao sy ny habetsaky ny vokatra. Izy ireo no mpanohana matanjaka an'i Chitsuru.
Avy eo, nanatevin-tena tamin'ny fetra ny mpikambana rehetra tamin'ny taona 2018!
Eo antenatenan'ny sakafo hariva dia efa nifanelanelana ihany koa ny loteria. Miaraka amin'ny fitrandrahana ny loka Lucky, ny loka fahatelo, ny loka faharoa, ny loka voalohany, dia mampiakatra hatrany ny fara tampon'ny fisakafoanana isan-taona.
Nifarana tamin'ny tontolo feno fifaliana sy filaminana ny sakafo hariva, tamin'ny taona vaovao, ny mpiasan'ny Nantong Chitsuru Foods dia handefa ireo vokatra tsara kalitao indrindra ary hanome serivisy tsara indrindra ho an'ny mpanjifa!
Taloha: Fotoana mety tsara hahafantaran'ny ankizy momba ny ahidrano Chitsuruya
Next: Ny tsenan-tsoavaly maina 2018 ao Rudong